Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Cunnooyinka Lugaha
Qaybta I - Siyaasadda Asturnaanta Websaydhka
Annagu haddaanu nahay Metro Meals on Wheels waxaan qadarinaynaa xiisaha aad u qabto degelkan. Asturnaantaadu waa muhiim waxaana naga go'an inaan ilaalino macluumaadka shaqsi ahaan lagu garan karo ee aad noo siiso. Waxaan rabnaa inaad fahamto dhaqamadeena si xushmad leh sida aan u soo ururino una isticmaalno macluumaadka aan ka soo ururinno martida.
Si aad u hesho macluumaad ama haddii kale looga faa'iideysto adeegyada shakhsi ahaaneed ee aan ku bixinno Websaydhkeenna, waa inaad bixisaa Macluumaadka Shakhsiyeed. Macluumaadka Aqoonsiga Shakhsiyeed waxaa ka mid ah macluumaadka xiriirka ee lagugu aqoonsan karo adiga magaca, cinwaanka, lambarka taleefanka, cinwaanka e-maylka, iyo / ama macluumaadka maaliyadeed. Ku siinta Cunnada metrooga ee Wheels-ka macluumaadkaaga shaqsiyeed waa mid iskaa wax u qabso ah.
Waxaan ku dadaalnaa inaan hubinno in dhammaan macluumaadka lagu soo bandhigo degelkeenna ay yihiin kuwo sax ah oo casriyeysan, laakiin ma ballanqaadayno macluumaadka. Adeegsiga websaydhka iyo waxyaabaha ku jira ayaa qatar kuu ah. Si aad ugu fududaato, waxaan kuu soo bandhigi karnaa xiriiriyeyaasha websaydhada dhinac saddexaad laakiin annaga mas'uul kama nihin waxa ku jira ama ka shaqeynaya websaydhyada ama siyaasadaha asturnaanta ee dhinacyadaas saddexaad. Nidaamkeena asturnaanta mar dambe ma khuseeyo markaad ku xireyso degel kale.
Waxaan xaq u leenahay inaan u siidino Macluumaadkaaga Shakhsi ahaaneed shaqaalaha iyo hay'adaha sharci fulinta marka la codsado inaan sidaa yeelno ama sida sharcigu qabo. Haddii kale, ma wadaagno Macluumaadka Shakhsiyeed.
Waxaad dooran kartaa in magacaaga laga saaro liiska diiwaangelintayada, aad joojiso inaad naga hesho waraaqaha; ama cusbooneysii Macluumaadka Shakhsiyeed ee aad na siisay, adoo adeegsanaya mid ka mid ah hababka soo socda:
Waxaad noo soo direysaa emayl: [email protected];
Wax noogu soo qorida: Meals Metro on Wheels, 1200 Washington Ave S, Suite 380, Minneapolis, MN 55415;
Naga soo wacaya: 612.623.3363
Waa siyaasaddeena inaan u hoggaansano Sharciga Ilaalinta Asturnaanta Qarsoodiga ah ee Carruurta ee 1998 iyo dhammaan sharciyada kale ee khuseeya. Annagu si gaar ah uma ururinno macluumaadka ku saabsan carruurta mana suuq geyno alaabtayada ama adeegyadayada carruurta.
Nidaamkan Khaaska ah ayaa la beddeli karaa iyada oo aan ogeysiis hore la helin. Sababtaas awgeed, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad dib-u-eegis ugu sameyso Siyaasaddan Khaaska ah xilliyo iyo inaad xusuusiso taariikhda dib-u-eegista ugu dambeysay. Haddii aadan ku raacsaneyn habka aan ugu talo galnay inaan ugu adeegsanno Macluumaadka Shakhsiyeed ee aad na siiso, waad ka bixi kartaa adeegsigaas adoo raacaya tilmaamaha hoose. Adoo adeegsanaya Boggeena, waxaad ku raacsan tahay shuruudaha Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ee dhaqan gala, wakhtigaas.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid Qoraalka Asturnaanta, dhaqamada boggan, ama la macaamilka websaydhkan, fadlan la xiriir:
1200 Washington Ave So
Qaybta II - Cunnada metrooga ee Wheels Ogeysiiska Dhaqanka Asturnaanta
OGEYSIISKAN SHARAXAYO SIDA LOO ISTICMAALO LOOGU SOO DHAWEYN KARO MACLUUMAADKA CAAFIMAADKA KU SAABSAN IYO SIDII AAD KU HELI KARTAA MACLUUMAADKAAN. FADLAN SI AAD U FIIRSAN.
Ogaysiiskan Ku Dhaqanka Asturnaanta wuxuu sharaxayaa sida aan u isticmaali karno una soo bandhigi karno macluumaadkaaga caafimaad si loo fuliyo daaweyn, lacag bixin ama hawlgallo daryeel caafimaad iyo ujeeddooyin kale oo sharcigu oggol yahay ama farayo. Waxay kaloo sharxaysaa xuquuqdaada helitaanka iyo xakamaynta macluumaadkaaga caafimaadka ee dhawrsan. Macluumaadka Caafimaadka ee la Badbaadiyay "PHI" waa macluumaad adiga kugu saabsan, oo ay ku jiraan macluumaadka dadka, oo lagu aqoonsan karo adiga oo la xiriira taariikhdiisii hore, hadda ama mustaqbalka jir ama maskax caafimaad ama xaalad iyo adeegyada daryeelka caafimaadka ee la xiriira.
Waxaa waajib nagu ah inaan ilaalino sirta PHIga iyo inaan ku siino ogeysiiskan. Waxaan beddeli karnaa shuruudaha ogeysiiskayaga, wakhti kasta. Ogeysiiska cusubi wuxuu noqon doonaa mid waxtar u leh dhammaan PHI-da aan dayactirno xilligaas. Markaad codsato, waxaan ku siin doonaa wixii ogeysiis ah ee Dhaqannada Asturnaanta. Waxaad codsan kartaa nooc dib loo eegay adigoo wacaya xafiiska oo aad codsato in nuqul dib loo eegay laguugu soo diro boostada.
Adeegsiga iyo Shaacinta Macluumaadka Caafimaadka ee La Ilaaliyay
PHI-gaaga waxaa isticmaali kara oo kashifaya shaqaalaha xafiiskayaga iyo kuwa kale oo ka baxsan xafiiskayaga kuwaas oo ku lug leh daryeelkaaga iyada oo ujeedadu tahay in lagu siiyo adeegyo daryeel caafimaad. PHI-gaaga ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa loona siidayn karaa si loogu bixiyo biilasha daryeelkaaga caafimaad. Kuwa soo socdaa waa tusaalooyin noocyada adeegsiga iyo shaacinta PHI-gaaga ah ee xafiiskeenna loo oggol yahay inuu sameeyo. Tusaalooyinkaan looma jeedin inay dhammaystiran yihiin, laakiin waxay sharraxayaan noocyada isticmaalka iyo kashifaadyada laga yaabo inay sameeyaan xafiiskayaga.
Waxaan la wadaagi doonnaa PHI-gaaga qeybta saddexaad “shuraakada ganacsiga” ee qabata howlo kala duwan (tusaale ahaan, adeegyada biilasha) ee ururkeena. Mar kasta oo heshiis u dhexeeya xafiiskayaga iyo ganacsade nala shaqeeya ay ku lug leedahay adeegsiga ama shaacinta PHI-gaaga, waxaan lahaan doonnaa heshiis qoran oo ay ku jiraan shuruudo ilaalin doona asturnaanta PHI-gaaga.
Waxaan u isticmaali karnaa ama shaaca uga qaadi karnaa PHI-gaaga, haddii loo baahdo, inaan ku siinno macluumaad ku saabsan adeegyada beddelka ah ama faa'iidooyinka iyo adeegyada kale ee caafimaadka la xiriira ee adiga xiisaha kuu ah. Waxaad la xiriiri kartaa Sarkaalkayaga Asturnaanta si aad uga codsato in aan lagugu soo dirin agabkan.
Daaweynta: Waxaan u isticmaali doonnaa una soo bandhigi doonnaa PHI-gaaga si aan u bixinno, isugu duwno, ama u maaraynno daryeelkaaga caafimaad iyo adeegyada la xiriira. Tan waxaa ka mid noqon kara isku dubbaridka ama maaraynta daryeelkaaga dhinac saddexaad. Markii sharcigu noo oggol yahay, waxaa laga yaabaa inaan u siidno PHI daryeel caafimaad bixiye kale oo ku lug leh daryeelkaaga.
Bixinta: PHI-gaaga ayaa loo isticmaali doonaa lana shaacin doonaa, hadba sida loogu baahdo, si loo helo lacag bixinta adeegyadaada daryeelka caafimaadka. Tan waxaa ka mid ah ogaanshaha haddii aad leedahay caymis gargaar caafimaad.
Hawlgallada Daryeelka Caafimaadka: Waxaan u isticmaali karnaa ama shaaca ka qaadi karnaa, sida loogu baahdo, PHI-gaaga si aan u taageerno howlaha ganacsi ee ururkeenna. Hawlahan waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn, qiimeynta tayada iyo hagaajinta, dib u eegista shaqaalaha, ardayda, shatiyeynta, howlaha lacag uruurinta, dhammaan mutadawiciinta, iyo qabashada ama diyaarinta howlaha kale ee ganacsiga.
Waxaan u isticmaali karnaa ama shaaca ka qaadi karnaa macluumaadkaaga dadka iyo taariikhaha aad adeegyada ka heshay xafiiskaaga, haddii loo baahdo, si aan kula soo xiriirno howlo lacag aruurin oo uu naga taageero xafiiskayagu. Haddii aadan rabin inaad hesho qalabkan, fadlan la xiriir Sarkaalkayaga Asturnaanta kana codso in aan lagugu soo dirin agabkan lacag ururinta.
Waxyaabaha Kale ee La Ogolyahay ee Loo Baahan Yahay iyo Shaacinta ee La Sameyn Karo Adiga oo aan Oggolaansho ama Fursad Aad Kuheshiin ama Ujeedo
Waxaan u isticmaali karnaa ama shaaca uga qaadi karnaa PHI-gaaga xaaladaha soo socda annaga oo aan oggolaansho kaa helin ama ku siinaynin fursad aad ku oggolaato ama ku diiddo. Xaaladahan waxaa ka mid ah:
Loogu Baahan Yahay Sharciga: Waxaan u isticmaali karnaa ama shaaca uga qaadi karnaa PHI-gaaga illaa heerka isticmaalka ama shaacinta uu sharcigu u baahan yahay. Adeegsiga ama shaac ka qaadista waxaa lagu sameyn doonaa iyadoo la waafajinayo sharciga waxayna ku koobnaan doontaa shuruudaha sharciga la xiriira. Waa laguu soo ogeysiin doonaa, haddii sharcigu u baahdo, wixii adeegsi ah ama bandhig ah.
Caafimaadka Bulshada: Waxaa laga yaabaa inaan u siidno PHIgaaga howlaha caafimaadka dadweynaha iyo ujeedooyinka hey'adda caafimaadka dadweynaha oo sharcigu u ogol yahay inay soo aruuriso ama hesho macluumaadka. Tusaale ahaan, kashifid ayaa loo samayn karaa iyadoo looga dan leeyahay kahortagga ama xakameynta cudurka, dhaawaca ama naafonimada.
Cudurada faafa: Waxaa laga yaabaa inaan u siidno PHI-kaaga, haddii sharcigu oggol yahay, qof laga yaabo inuu ku dhacay cudur la is qaadsiiyo ama haddii kale khatar ugu jira inuu ku dhaco ama ku faafo cudurka ama xaaladda.
Kormeerka Caafimaadka: Waxaa laga yaabaa inaan u siidno PHI hay'adda kormeerka caafimaadka howlaha uu sharcigu oggol yahay, sida xisaabaadka, baaritaanka, iyo kormeerka. Hay'adaha kormeerka ee raadinaya macluumaadkan waxaa ka mid ah hay'adaha dowladda ee kormeera nidaamka daryeelka caafimaadka, barnaamijyada waxtarka dowladda, barnaamijyada kale ee sharciyeynta dowladda iyo sharciyada xuquuqda madaniga ah.
Cay ama Dayacaad: Waxaa laga yaabaa inaan u siidno PHI-gaaga mas'uuliyiinta saxda ah ee ku saabsan xadgudubka suurtagalka ah ama dayacaadda cunug ama qof weyn oo nugul. Haddii ay jirto khatar weyn oo ku timaadda caafimaadka qofka iyo nabadgelyadiisa, waxaa laga yaabaa inaan u siidino macluumaadka qofka ama sharci fulinta.
Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka: Waxaa laga yaabaa inaan u siidno PHI-gaaga hay'adaha ay maamusho Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka si loo cabiro tayada, amniga, ama waxtarka badeecadooda.
Talaabooyinka Sharciga: Waxaa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno PHI si aan uga jawaabno amar ka soo baxay maxkamad ama maamul maamuleed (illaa iyo inta bixinta noocan oo kale ah si cad loo oggol yahay), ama xaaladaha qaarkood iyadoo laga jawaabayo dalab maxkamadeed, dalab helitaan ama habraac kale oo sharci ah.
Fulinta Sharciga: Waxaan sidoo kale u siideyn karnaa PHI ujeedooyin sharci fulin ah. Ujeeddooyinkaas fulinta sharciga waxaa ka mid ah (1) habsocodyada sharciga ah iyo haddii kale sharcigu u baahan yahay, (2) codsiyo macluumaad oo kooban oo ku saabsan aqoonsiga iyo ujeeddooyinka goobta, (3) ee la xiriira dhibbanayaasha fal dambiyeed, (4) tuhun ah in dhimashadu ay u dhacday fal dambiyeed, (5) haddii fal dambiyeed ka dhaco dhismayaasha ururkayaga, iyo (6) xaalad caafimaad oo deg deg ah (ma ahan dhismaheenna) waxayna u badan tahay inuu fal dambiyeed dhacay.
Baarayaasha aaska, Agaasimayaasha aaska, iyo ku deeqa xubnaha: Waxaa laga yaabaa inaan u siidno PHI baare caafimaad, baaritaanka geerida, agaasimaha aaska, iyo sarkaalka sharci fulinta ama hay'adda ku deeqa xubnaha. Waxa kale oo laga yaabaa inaan u siidno qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan qofka dhintay ehelka ugu dhow.
Cilmi baaris: Waxaa laga yaabaa inaan u siidno PHI-gaaga baarayaasha ujeedooyin sida sharcigu ogol yahay ama haddii aad ogolaansho siisay.
Waxqabadka Dembiga: Iyadoo la waafajinayo sharciyada federaalka iyo gobolka ee khuseeya, waxaa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno PHI-gaaga, haddii aan aaminsanahay in isticmaalka ama siideynta loo baahan yahay si looga hortago ama loo yareeyo halista halista ah ee dhow ee caafimaadka ama badbaadada qofka ama dadweynaha. Waxa kale oo laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno PHI haddii ay lagama maarmaan u tahay saraakiisha fulinta sharciga inay aqoonsadaan ama qabtaan shaqsi.
Magdhawga Shaqaalaha: Waxaa laga yaabaa inaan shaaca uga qaadno PHI-gaaga sida laguu oggol yahay inuu u hoggaansamo sharciyada magdhawga shaqaalaha iyo barnaamijyada kale ee la midka ah ee sharci ahaan lagu aasaasay.
Xarunta Toosinta: Waxaan u isticmaali karnaa ama u siideyn karnaa PHI-gaaga maxbuus ama qof kale oo gacanta ku haya sharci fulinta ama xarunta dhaqan celinta.
Adeegsiga iyo Shaacinta Macluumaadka Caafimaadka ee La Badbaadiyay Iyadoo Lagu saleynayo Oggolaanshahaaga Qoraalka ah
Adeegsiga kale iyo shaac ka qaadista PHI-gaaga waxaa lagu sameyn doonaa oo keliya oggolaanshahaaga oo qoran, haddii kale haddii kale loo oggolaado ama sharcigu u baahan yahay sida hoos lagu sharaxay. Waad ka noqon kartaa oggolaanshahan qoraal waqti kasta. Haddii aad ka noqoto oggolaanshahaaga, dib dambe uma isticmaali doonno ama shaaca kama qaadi doonno PHI-gaaga sababaha uu ku xusan oggolaanshahaaga qoran. Fadlan fahan in aanaan awoodin inaan la soo laabano wax kasta oo shaaca laga qaaday oo horey loogu soo qaatay ogolaanshahaaga.
Adeegsiga Kale ee La Ogolyahay loona Baahan Yahay iyo Shaacinta oo Kuu Baahan Fursad Aad Ku Raacdo ama Ku Diido
Waxaa laga yaabaa inaan u isticmaalno una soo bandhigno PHI-gaaga xaaladaha soo socda. Waxaad fursad u leedahay inaad ogolaato ama diiddo adeegsiga ama shaacinta dhammaan ama qayb ka mid ah PHI-gaaga. Haddii aadan joogin ama aadan awoodin inaad ku raacdo ama aad diiddo adeegsiga ama bixinta macluumaadka PHI, markaa takhtarkaaga, isagoo adeegsanaya go'aan xirfad leh, ayaa go'aamin kara in shaacinta ay tahay dantaada ugu fiican.
Tusaha Barnaamijka Ilaa aad diidid, waxaan u isticmaali doonnaa kuna shaacin doonnaa galka barnaamijkeenna magacaaga, goobta aad ka heleyso daryeelka, xaaladdaada guud (sida mid caddaalad ah ama deggan), iyo diinta aad ku xiran tahay. Dhammaan macluumaadkaan, marka laga reebo ku xirnaanshaha diinta, waxaa loo soo bandhigi doonaa dadka magacaaga ku weydiista. Ku xirnaantaada diinta waxaa la siin doonaa oo keliya xubin ka mid ah wadaaddada, sida wadaad ama raahib.
Kuwa Kale Waxay Ku Lug Lahaayeen Daryeelkaaga Caafimaad ama Bixinta Daryeelkaaga: Ilaa aad diidid, waxaan u sheegi karnaa xubin qoyskaaga ah, ehelkaaga ah, saaxiib aad isku dhow tihiin ama qof kale oo aad aqoonsato, PHI-gaaga oo si toos ah ula xiriira ka qaybgalka qofkaas ee daryeelkaaga caafimaad. Haddii aadan awoodin inaad ogolaato ama diido shaacinta noocaas ah, waxaa laga yaabaa inaan shaaca ka qaadno macluumaadka noocan ah haddii loo baahdo haddii aan go'aansanno inay tahay dantaada ugu wanaagsan ee ku saleysan go'aankeenna xirfadeed.
Waxaan u isticmaali karnaa ama shaaca uga qaadi karnaa PHI si aan u ogeysiinno ama gacan uga geysano ogeysiinta xubin qoys, wakiil shakhsi ama qof kale oo mas'uul ka ah daryeelkaaga goobtaada, xaaladda guud ama dhimashada. Ugu dambeyntiina, waxaan u adeegsan karnaa ama u siideyn karnaa PHI-gaaga hay'ad idman oo loo oggol yahay ama hay'ad gaar loo leeyahay inay ka caawiso dadaallada gargaarka masiibada iyo isku dubaridka adeegsiga iyo siidaynta qoysaska ama shakhsiyaadka kale ee ku lug leh daryeelkaaga caafimaad.
Xuquuqdaada macluumaadka caafimaadka
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato xaddidaadda PHI-gaaga: Tan macnaheedu waa inaad na weydiisan kartaa inaanan u isticmaalin ama shaaca ka qaadin qayb ka mid ah PHI-gaaga ujeeddooyinka daaweynta, lacag-bixinta ama howlaha daryeelka caafimaadka. Waxa kale oo aad codsan kartaa in qayb ka mid ah PHI-gaaga aan loo soo bandhigin xubnaha qoyskaaga ama asxaabta laga yaabo inay ku lug leeyihiin daryeelkaaga ama ujeeddooyin ogeysiis ah sida lagu sharraxay Ogeysiiska Ku-Dhaqanka Asturnaanta. Waxaad ku codsan kartaa xakameyn qoraal ah.
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato oo aad kormeerto oo aad nuqul ka sameysato PHI-gaaga: Tan macnaheedu waa inaad baari kartaa oo aad heli kartaa nuqul ka mid ah PHI-da adiga kugu saabsan inta aan ilaalineyno PHI. Waxaad heli kartaa diiwaankaaga caafimaad oo ay kujiraan diiwaanada caafimaadka iyo biilasha iyo diiwaanada kale ee ururku u isticmaalo go'aamada adiga kugu saabsan. Sida uu oggol yahay sharciga federaalka ama gobolka, waxaa laga yaabaa inaan kaa qaadno khidmad nuqul macquul ah nuqul ka mid ah diiwaanadaada.
Marka la eego sharciga federaalka, hase yeeshee, ma baari kartid ama nuqul ka sameysan kartaa diiwaanadan soo socda: Qoraallada cilminafsiga; macluumaadka lagu soo ururiyey si macquul ah u filanaya, ama u adeegsanaya, dacwad madani ah, fal dambiyeed, ama maamul ama dacwad ah; iyo natiijooyinka sheybaarka ee sharciga waafaqsan oo mamnuucaya gelitaanka PHI. Iyada oo kuxiran duruufaha jira, go'aanka diidmada booqashadu wuxuu noqon karaa mid dib loo eegi karo. Xaaladaha qaarkood, waxaad xaq u yeelan kartaa in dib loo eego go'aankan. Fadlan la xiriir Sarkaalkayaga Asturnaanta haddii aad su'aalo ka qabtid helitaanka diiwaankaaga caafimaad.
Waxaad xaq u leedahay inaad naga codsato inaad naga hesho isgaarsiin qarsoodi ah qaabab kale ama goob kale. Waanu waafajin doonnaa codsiyo macquul ah. Waxaan sidoo kale shuruud uga dhigi karnaa degelkan adiga oo ku weydiin doona macluumaad ku saabsan sida lacag bixinta loo maareyn doono ama faahfaahinta cinwaan kale ama qaab kale oo lagula xiriiro. Kaa codsan mayno sharraxaad ku saabsan aasaaska dalabka. Fadlan ku samee codsigan qoraal ahaan Sarkaalkayaga Asturnaanta.
Waxaad xaq u yeelan kartaa inaad wax ka beddesho PHI-gaaga: Waad na weydiisan kartaa inaan beddelno macluumaadka caafimaadka qaarkood. Waxaad ubaahantahay inaad codsi noocan oo kale ah ku sameyso qoraal. Xaaladaha qaarkood, waan diidi karnaa codsigaaga wax ka beddelka. Waa inaad sharraxdo sababta macluumaadka loo beddelayo. Haddii aan aqbalno beddelkaaga, waxaan isku dayi doonnaa inaan ku wargalinno kuwa qaata hore (oo ay ku jiraan dadka aad liiska ku qortay) isbeddelka. Waxaan ku soo dari doonnaa isbeddelada sii deyntaada adiga PHI ee mustaqbalka. Haddii codsigaaga la diido, waxaan u diri doonaa diidmo qoraal ah. Diidmadani waxay ka koobnaan doontaa sababta oo waxay sharraxaysaa talaabooyin kasta oo aad jawaab kaga bixin karto.
Waxaad xaq u leedahay inaad hesho xisaab-bixin ku saabsan shaaca ka qaadis gaar ah oo aan sameynay, haddii ay jirto, PHI-gaaga. Xuquuqdani waxay khuseysaa shaacinta ujeeddooyin aan ka ahayn daaweyn, lacag-bixin ama hawlgallo daryeel caafimaad sida lagu sharxay Ogeysiiska Ku-Dhaqanka Asturnaanta. Waxay ka reebeysaa shaac ka qaadis aan kugu sameyn karnay haddii aad noo oggolaatay inaan siidaynta u bixinno, buugga hagaha barnaamijka, xubnaha qoyska ama asxaabta ku lugta leh daryeelkaaga, ama ujeedo ogeysiin ah, amniga qaranka ama sirdoonka, sharci fulinta (sida lagu siiyay qaanuunka arrimaha gaarka ah) ama tas-hiilaadka asluubta, iyadoo qayb ka ah shaacinta xogta xadidan. Waxaad xaq u leedahay inaad hesho macluumaad qaas ah oo ku saabsan bandhigyadaan dhacaya wixii ka dambeeya Abriil 14, 2003. Xuquuqda aad ku heli karto macluumaadkan waxay ku xiran tahay ka-reebitaanno gaar ah, xaddidaadyo iyo xaddidaadyo qaarkood.
Waxaad xaq u leedahay inaad naga hesho nuqul warqad ah oo ah ogeysiiskan, Markaad codsato, xitaa haddii aad ogolaatay inaad ku aqbasho ogeysiiskan si elektaroonig ah.
Su’aalo iyo Cabasho
Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo ku saabsan dhaqammadayaga gaarka ah, fadlan la xiriir Sarkaalkayaga Asturnaanta ee 612-623-3363.
Haddii aad u maleyneyso in xuquuqdaada gaarka ah lagu xad gudbay, ama haddii aadan ku raacsaneyn go'aanka ku saabsan mid ka mid ah xuquuqdaada, waxaad noo soo xareyn kartaa cabasho adiga oo la xiriiraya 612-623-3363 ama cabashadaada ku soo dir qoraal ahaan iyo boostada ugu dir:
Attn: Sarkaalka Asturnaanta
1200 Washington Avenue South, Suite 380
Waxaad sidoo kale u diri kartaa cabasho qoraal ah Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka - Xafiiska Xuquuqda Madaniga, http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Ogeysiiskan waxaa la daabacay oo dhaqan galay Jan. 1, 2013.